Tadiavo ny trano fanariam-pako, Riga ny trano rendrika
Vaky ny trano
Adiresy: Letonia, Riga, ul. Kalku, 6;
Built: in 1896.
Ao Riga, iray amin'ireo toerana tiany hitsidihana ny Trompeter House, izay mipetraka eo am-piandohan'ny lalan'i Kalku. Hatramin'ny fananganana sy mandraka androany, mbola mitoetra ny trano. Ny tranobe dia manintona ireo mpizaha tany ary ny iray amin'ireo angano malaza indrindra ao Riga no mifandray amin'izany.
Tranoben'ny rameva mamafa, Riga - tantaram-pinoana
Tranoben'ny tranon'olona nipoitra tamin'ny 1896, natsangana araka ny fanoratry ny tompony Wilhelm Boxlaf, ary ny asa famerenana amin'ny laoniny dia natao tamin'ny taona 2004. Ny tranobe dia manomboka ny taonjato faha-18 ary misintona ireo mpizahatany manana sary sokitra iray eo an-tampony.
Asehony sary an-tsarimihetsika izy io, izay mitazona ny tohatra amin'ny tanany iray, ary ny voalobony amin'ny andaniny. Ny tantaran'ny sary sokitra dia porofon'ny tantaran'ny fitiavana. Indray mandeha dia nipetraka tamina fianakaviana mpanankarena iray ny ankizivavy, izay ankizivavy iray dia lasa tia fiara tsotra. Ny fihetseham-pony dia nifanaraka, fa ny ray ny tia dia manohitra ny fifandraisana tsy mitovy. Rehefa nanendry daty ho an'ilay tovovavy tao amin'ilay trano kely ilay tovolahy, dia nanidy ny zanany vavy tao amin'ilay efitra ilay lehilahy mpanankarena ary nandeha nivory.
Nitsangatsangana teny amin'ny tohatra teny amin'ny tohatra ilay rivo-doza toy ny nisehoan'ny raim-pianakaviana teo amin'ny tafo. Nisy lehilahy mpanan-karena iray nisaintsaina fohifohy, nanosika ny tohatra, nahatonga ilay tovolahy ho lavo sy nanapaka ny tongony. Ilay zazavavy, rehefa nianatra momba ny tsy fahampiana, dia marary tamin'ny aretina, izay nampalahelo ny lohan'ny fianakaviana. Noho izany, nibebaka ny asany izy, nandoa vola amin'ny fikarakarana ny vatomamy ary namela ny fanekeny ny fanambadiana. Marina izany fanapahan-kevitra izany, satria ny rafozambaviny dia nanana vina fandraharahana ary nanampy tamin'ny fampitomboana ny toe-draharahan'ny rafozan-janany.
Amin'ny maha-famantarana ny fankasitrahana sy fanenenana, ilay mpanan-karena dia nandidy sary sokitra iray, izay mbola napetraka eo an-tampon'ny trano. Ireo singa izay mitazona ireo mpitaingin-tsoavaly mitazona eo an-tanany dia tsy voafidy vintana: ny voaloboka dia maneho ny fahazotoana, ary ny tohatra dia ny fikirizana.
Hatramin'ny nanatrehana fiaramanidina iray dia noraisina ho marika tsara ny mpandeha an-tongotra. Amin'izao fotoana izao dia misy trano fonenana, ary misy tranombarotra samihafa eny amin'ny tany.
Raha raisina fa eo akaikin'ny tranon'ny Chimney dia misy trano fisakafoanana sy tranombarotra marobe izay ahitanao fahatsiarovana, ny kolkoly na ny loko Kolku dia malaza be. Ao amin'ny Old Town izy io ary manomboka eo amoron-dranomasina ny 11 Novambra. Tsy ny House of Chimney ihany no mivezivezy, fa ny fanatanjahan-tena hafa, ohatra, ny lapan'ny tanàna .
Ahoana no fomba handaminana kardinaly iray ao an-trano?
Trano ho an'ny lakozia avy amin'ny hazo mafy
Fihetsiketsehana amin'ny teething
Lady Gaga dia nanandrana naneho sary manjavozavo nandritra ny fitondrana fibromyalgia
Ny loza mitatao amin'ny fivoahana voalohany - ahoana no hisorohana?
Ny palitao beige ny vehivavy - fototra tena tsara ho an'ny lamaody
Ny dokotera dia nandrara ny mpihira Solange Knowles
Ahoana no hahatonga azy ho namana tsara indrindra?
Aretin'ny aretin-kozatra eo amin'ny lohalika - ny antony sy ny fitsaboana ny gonarthrosis amin'ny dingana rehetra
Lamina mainty lava ao amin'ny balala.
Inona no hanomezana zaza 4 taona?
Ny rantsan-tànana inona no miteraka peratra?
Fitsipi-pitondran-tena ao amin'ny toeram-bahoaka ho an'ny mpianatra
Ny andriamanitra masoandro an'ny Grika